ဗြိတိန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Sajid Javid ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
လန်ဒန် ၊ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Sajid Javid သည် ၎င်းအနေဖြင့် ပြီးခဲ့သော ညပိုင်းက အားအင်ကုန်ခမ်း ချိနဲ့သည်ဟုခံစားရပြီးနောက် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် Positive ရလာဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း စနေနေ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။၎င်းက တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်၌ ရေးသားခဲ့ရာတွင် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံမှုခံယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်ခြင်းမရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယခုအခါ မိသားစုနှင့်အတူ အိမ်တွင် သီးခြားခွဲ၍ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ အကယ်၍ ဆေးမထိုးရသေးဘူးဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူကြဖို့ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။Javid သည် ပြီးခဲ့သောလက ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားသော ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Matt Hancock နေရာတွင် အစားထိုးခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားသော Hancock သည် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခပ်ခွာခွာနေထိုင်ရေး စဉ်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်၍ ၎င်း၏ အနီးကပ်လက်ထောက်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် နမ်းရှိုက်နေပုံများ သတင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံး အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း နောက်ထပ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅၁,၈၇၀ ဦးရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၅,၃၃၂,၃၇၁ ဦးထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် ဆက်စပ်၍ သေဆုံးသူပေါင်း ၁၂၈,၆၄၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂလန်၏ lockdown ပိတ်ဆို့မှု အပြီးသတ်ခြေလှမ်း သို့မဟုတ် စတုတ္ထခြေလှမ်း လမ်းပြမြေပုံ အရ COVID-19 ကန့်သတ်ချက်များကို လာမည့် တနင်္လာနေ့တွင် အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရက အတည်ပြုပြောကြားထားသည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်များက ယခုအဆင့်တွင် ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲများ ရှင်သန်ကြီးထွားလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
ဗြိတိန်၏ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ နိုင်ငံသား ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံထားကြပြီး ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်စလုံး ထိုးနှံမှုခံယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိသော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ပုံမှန်လူနေထိုင်မှု ဘဝရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ဗြိတိန် ၊ တရုတ် ၊ ရုရှား ၊ အမေရိကန်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများအပြင် ဥရောပသမဂ္ဂ စသည့်နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
LONDON, July 17 (Xinhua) — British Health Secretary Sajid Javid said Saturday that he has tested positive for COVID-19 after feeling “a bit groggy” last night.
“Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already,” he said. Javid became the British health secretary following the resignation of Matt Hancock last month. Hancock broke COVID-19 social distancing guidelines during an alleged affair with his aide, which reportedly caused an outrage in the country.
Britain reported on Friday another 51,870 coronavirus cases in the latest 24-hour period, bringing the total number of coronavirus cases in the country to 5,332,371, official figures showed. The total number of coronavirus-related deaths in Britain reached 128,642.
More than 87 percent of the Britain’s adults have received one dose of COVID-19 vaccine, while over 67 percent have received two jabs, the latest figures showed.
Photo – British Health Secretary Sajid Javid